ॐ जान्नुहोस्, कुन दिन कुन भगवानलाई पुजाआजा गर्दा मनोकामना पुरा हुने गर्छ ? - Sabal Post
ॐ जान्नुहोस्, कुन दिन कुन भगवानलाई पुजाआजा गर्दा मनोकामना पुरा हुने गर्छ ?
सनातन धर्मको मान्यताअनुसार ३३ करोड देवी–देवता छन् । यी सबै देवी–देवताको पूजा एकसाथ गर्न सम्भव पनि छैन । त्यसैले हरेक बारको आफ्नै महत्व रहिआएको छ । यद्यपि, कुनै–कुनै दिनमा भने विशेष देवी–देवताको पूजाअर्चना गर्दा सांसारिक कामना पूरा हुने जनविश्वास छ । सप्ताहको सात दिनले पनि विशेष महत्व राख्दछ । हिन्दु धर्मले कुन दिन कुन देवी–देवताका लागि समर्पित छ भन्ने कुरालाई प्रष्ट पारेको छ । यसरी गरिने पूजाबाट के फल मिल्छ जानी राखौँ ।
सभापति भरत कुमार शाह द्धारा पिताम्बर सापकोटाको…
ॐ शुक्रबार यसो गर्नाले मिल्नेछ आर्थिक लाभ
महाराष्ट्रमा बस र्दुघटना , ३३ को मृत्यू